DVDStyler: ဒီဗီဒီဖန်တီးခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းအတွက်အခမဲ့နှင့်ပလက်ဖောင်းအက်ပလီကေးရှင်း | Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | | applications များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် operating system ငါတို့သုံးချင်တယ်၊ ငါတို့လိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာငါတို့လိုချင်ခဲ့ပြီ၊ လိုအပ်ခဲ့ပြီ၊ DVD တစ်ခုဖန်တီးပါ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် - ရှာဖွေနေ, သောအတူဖြစ်ပါတယ် အဖုံးနှင့် menu ကိုအခြားဒြပ်စင်များနှင့် / သို့မဟုတ်အဆောက်အ ဦ များအကြား။ ထို့ကြောင့်ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်မည် ဒီသီချင်းလေး.
ဒီသီချင်းလေး အခမဲ့နှင့် Multiplatform application တစ်ခုဖြစ်သည် ဒီဗီဒီဖန်တီးခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်း။ အဲဒါကဒီဗီဒီနဲ့အလွယ်တကူ DVD ဖန်တီးနိုင်အောင်လုပ်ပေးပါတယ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြည့်ရှုပါ ဒါကများသောအားဖြင့်လိုအပ်တယ်။
ဒီသီချင်းလေး အဘယ်သူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရပ်တန့်နေသည်, ဆိုလိုသည်မှာ၎င်း၏လျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်သည် နောက်ဆုံးပေါ်တည်ငြိမ်သောဗားရှင်း အပေါ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် 19 / 05 / 2019။ သို့သော်၎င်းသည်တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းဖြစ်ပြီးရင့်ကျက်သော (အကျိုးရှိစွာ / အသုံးဝင်သော) နှင့် repositories အများစုတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် GNU / Linux Distros။ ဒါကြောင့်လူတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်တဲ့ application တစ်ခုအနေနဲ့ပယ်ချလို့မရပါဘူး။
လိုအပ်ချက်နှင့်အညီနေထိုင်ဆဲတည်ငြိမ်သော်လည်းဟောင်းနွမ်းသောအပလီကေးရှင်း၏နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် ဒီသီချင်းလေးလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ထုတ်ဝေမှုကိုကြည့်ရှုရန်စိတ်ဝင်စားသူများကိုဖိတ်ခေါ်ပါသည် ဒီသီချင်းလေး သို့မဟုတ်မှာသင်၏ website link ကိုတိုက်ရိုက်သွားပါ နေပြည်တော်နေဆဲတည်ရှိသည်သော။
"DVDisaster သည် CDs, DVDs (သို့) Blu-Rays ဖြစ်စေ၊ optical drive မှအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ခွင့်ပြုရုံသာမကသူတို့၏အခြေအနေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြသည့်ဂရပ်တစ်ခုဖြင့် discs များ၏အခြေအနေကိုလည်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။" Dvdisaster ဖြင့်သင်၏စီဒီများသို့မဟုတ်ဒီဗီဒီများမှအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူပါ
1 DVDStyler: အခမဲ့နှင့်ပလက်ဖောင်းပုံစံ
1.1 DVDStyler ဆိုတာဘာလဲ။
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည် -
"DVDStyler သည်ဗွီဒီယိုဝါသနာရှင်များကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြည့်သည့်ဒီဗီဒီများဖန်တီးရန်အခမဲ့၊ ပလက်ဖောင်းကူးနိုင်သောဒီဗီဒီရေးသားခြင်း application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် GNU General Public License (GPL) အရဖြန့်ဝေထားသောအခမဲ့ software ဖြစ်သည်။"
ထို့ကြောင့်အတူ ဒီသီချင်းလေး ရိုးရိုးလေးပါ၊ ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေကိုဒီဗွီဒီထဲကူးထည့်ပါ မည်သည့် DVD player မှမဆိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာပြန်ဖွင့်နိုင်သည် စိတ်ကြိုက် DVD မီနူးများကိုဖန်တီးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရသာနှင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသောအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်သည်။
၎င်းကိုကိုယ်ပိုင်ဗဟုသုတအပြန်အလှန်မီနူးတစ်ခုဖြင့် DVD မှဗွီဒီယိုများဖန်တီးရန်နှင့်ကူးရေးရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
DVD preview မီနူးများ၊ ခလုတ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင့်အားဖန်တီးထားသောမီနူးများတွင်ထည့်သွင်းထားသောမည်သည့်ခလုတ် (သို့) ဂရပ်ဖစ်အရာဝတ္ထုကိုမဆိုသွားလာမှုနှင့်ချုံ့ချဲ့မှုများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခွင့်ပေးသည်။
မည်သည့်ဖိုင်ကိုမဆိုဖန်တီးခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်၎င်းသည်အဓိကဗီဒီယိုနှင့်အသံကုဒ်အားလုံးနီးပါးကိုထောက်ပံ့သည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းသည် AVI, MOV, MP4, MPEG, OGG, WMV အမျိုးအစားများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ အခြားအသံနှင့်ဗွီဒီယိုများအကြား AC-3, DivX, Xvid, MP2, MP3, MPEG-2, MPEG-4 ကိုလည်းအထောက်အပံ့ပေးထားသည်။
၎င်းတွင် multicore ပရိုဆက်ဆာများကိုထောက်ပံ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းကို C / C ++ တွင်ရေးသားပြီး၎င်းသည်ပလက်ဖောင်းကိုအမှီအခိုကင်းစေသည်ဖြစ်သော wxWidgets graphical toolkit ကိုအသုံးပြုသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာ၎င်းသည် multiplatform (GNU / Linux, Microsoft Windows နှင့် MacOS) ဖြစ်သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါကတရားဝင် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် ဒီသီချင်းလေး en နေပြည်တော်။ အထူးသဖြင့်၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာရန်သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် စပိန်အတွက်တရားဝင်သင်ခန်းစာ နောက်တစ်ခုကိုနှိပ်ပါ link ကို.
အချို့သောအလားတူအခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသော application များသည် -
ဖွင့် DVD ကိုထုတ်လုပ်သူ
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «DVDStyler»ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဗီဒီများကိုတီထွင်ခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အသုံးပြုသည့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးလက်ရှိလက်ရှိနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သောပုံစံမျိုးစုံသော application; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ယခုသင်ဤကြိုက်လျှင် publicación, မရပ်ပါနှင့် မျှဝေပါ အခြားသူများနှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ လိုင်းများ၊ လူမှုရေးကွန်ယက်များသို့မဟုတ်စာတိုပေးပို့ရေးစနစ်များ၏အသိုင်းအဝိုင်းများ၊ ဖြစ်နိုင်ရင်အခမဲ့၊ ကွေးနနျးစာ, signal, Mastodon သို့မဟုတ်အခြား Fediverse, ဖြစ်နိုင်ရင်။ ပြီးတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ပင်မစာမျက်နှာကိုကြည့်ဖို့သတိရပါ «FromLinux» သတင်းများကိုပိုမိုလေ့လာရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်ချန်နယ်ဖြစ်သည် DesdeLinux မှကြေးနန်း. သတင်းအချက်အလက်များပိုမိုရယူရန်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်သွားရောက်နိုင်သည် အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက် como OpenLibra y JedIT, ဒီခေါင်းစဉ်နှင့်အခြားသူများမှဒီဂျစ်တယ်စာအုပ်များ (PDFs) ကိုဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » DVDStyler: ဒီဗီဒီဖန်တီးခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းအတွက်အခမဲ့နှင့်ပလက်ဖောင်းအက်ပလီကေးရှင်း
လွန်ခဲ့တဲ့ 10 လအတွင်း
ကြည့်ရတာအရမ်းကောင်းတယ် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်ပေလိမ့်မည်၊ သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်သည် DVD / Blu-Ray ၌အနည်းငယ်သာမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဒါဟာနေဆဲတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်လိမ့်မည်။ ဆောင်းပါးနှင့်ထောက်ခံချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ၊ CD / DVD / BluRay တွင်ကူးယူရန်မလိုအပ်ပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤ application သည် .iso format ဖြင့်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သော option ရှိသည်။ ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုချိန်ရန်ချိန်ညှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံသို့ကျွန်ုပ်တို့ပို့ပေးလိုက်သည်။ သို့မှသာ ၄ င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများ (ဒီဗီဒီစက်များတွင်ယခင်ကကြည့်ရှုနိုင်သည်) ။
Linux Post Install လုပ်ပါ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ, willalfangom ။ သင်၏မှတ်ချက်နှင့်အကြောင်းအရာအတွက်ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
Linux Post Install လုပ်ရန်
နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်, eJoagoz ။ သင်၏မှတ်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ သင်မှတ်ချက်ပေးသည့်လျှောက်လွှာကိုသင်ကြိုက်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည်။
Dogecoin ကျဆင်းမှု၊ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းမှု Elon Musk သည် DOGE စာရင်းအားဝေဖန်သောကြောင့်
PayPal, Microsoft, Apple, Netflix, Uber နှင့်အခြားကုမ္ပဏီ ၃၀ တွင် code dependency တိုက်ခိုက်မှုသည်ခွင့်ပြုသည်